HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mongol Norvezianina Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tshiluba Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany)
TSY dia manaitra noho ny hazo sedera mijoalajoala any Libanona angamba ny hazo oliva, amin’izato vatany miolakolaka sy marokoroko. Mahavariana anefa fa mafy toto ny hazo oliva. Mahatratra 1 000 taona eo ho eo ny sasany aminy. Misandrahaka be ny fakany ka afaka ny ho velona indray ilay hazo, na dia potika aza ny vatany. Mitsimoka izy raha mbola velona ny fakany.
Nino i Joba fa mbola ho velona indray izy na dia tsy maintsy ho faty aza. (Joba 14:13-15) Niresaka momba ny hazo izy mba hampisehoana fa natoky hoe afaka manangana azy Andriamanitra. Hazo oliva angamba no noresahiny. Hoy izy: “Mbola misy fanantenana na ho an’ny hazo aza. Raha tapaka mantsy izy, dia mbola hitsimoka indray.” Velona indray ny fototry ny hazo oliva efa maina, rehefa avy ny orana aorian’ny hain-tany mafy. Misy tsimoka mipoitra avy amin’ny fakany, ka lasa misy “rantsana toy ny zavamaniry vao mitsiry” ilay hazo.—Joba 14:7-9.
Tsy andrin’ny mpamboly ny hampitsimoka ny hazo oliva notapahina. Toy izany koa fa maniry mafy ny hamelona indray an’ireo mpanompony nodimandry sy ny olona maro hafa i Jehovah Andriamanitra. (Mat. 22:31, 32; Jaona 5:28, 29; Asa. 24:15) Ho faly be isika hiarahaba an’ireo hatsangana amin’ny maty sy hahita azy ireo hankafy fiainana mahafinaritra indray.
Hizara Hizara Mbola Hitsimoka Indray ve ny Hazo Raha Tapahina?